Bannerflow: Naqshadaynta, Miisaanka, iyo Ololaha Daabacaad | Martech Zone
Bannerflow: Naqshadaynta, Miisaanka, iyo Ololaha Daabacaadda
Khamiis, Juun 21, 2018 Khamiis, Juun 21, 2018 Douglas Karr
Maaddaama marinnada xayeysiintu ay noqdaan kuwo kala jaad ah, awoodda dhisidda, wada shaqaynta, iyo helitaanka xayeysiiska banner ee la oggolaaday waxay noqon kartaa riyo cabsi leh. Kaabayaasha Maareynta Hal abuurka (CMP) waxay siinayaan awood u lahaanshaha hagaajinta naqshadeynta, hagaajinta socodka shaqada, iyo u-habeynta dhammaan hal-abuurka heerarka warshadaha. Barmaamijka maaraynta hal abuurka ee Bannerflow ayaa ku siinaya adiga xakameyn buuxda oo ku saabsan wax soo saarka iyo qeybinta xayeysiiska, taasoo kuu badbaadineysa waqti iyo lacag.
Haddii aad ka shaqeysid wadiiqooyin kala duwan, suuqyo badan, iyo qaabab badan, Bannerflow waxay qaadaysaa qaadista culus, taasoo kuu oggolaaneysa inaad safka hore kaga jirto xayeysiinta dhijitaalka ah.
Astaamaha Bannerflow waxaa ka mid ah awoodda kooxaha xayeysiinta u leh:
Samee boorarkaaga - U samee HTML5 boorarka warbaahinta hodanka u ah qalab kasta iyo madal kasta, laga bilaabo moobiilka illaa warbaahinta hodanka ah.
Miisaanka - Hal banner ka soo saar dhammaan cabbirka iyo kala duwanaanshaha ololahaaga.
Translate - Kala shaqee daruuraha turjumaanada hana u oggolaadaan inay si toos ah wax uga beddelaan nuqul banner ah. Iska ilow xaashiyaha dibadda!
Iskaashiga - Faallo ka bixi oo ansixiya mashiinka si aad uga dhakhso badan dhammaan howlahaaga wax soo saarkaaga. Macsalaamee silsiladaha emaylka ee qasan.
Jadwalka - Horey u sii qorshee ololeyaasha adiga oo si fudud u shaqeynaya soo jiita iyo hoos u dhiga
naadiya - Waqti badbaadi adoo si fudud ugu daabacaya dhammaan shabakadaha xayeysiiska ah, yar ama weyn, ku dhex-madal.
Falanqee oo hagaaji - Qaado go'aanno xog-ogaal ah isla markaana aad u hagaajiso ololeyaasha adoo adeegsanaya astaamaha sida khariidadaha kuleylka iyo baaritaanka A / B.
Codso Tijaabo Bilaash ah
Tags: tirada xayeysiiskabanner socodkamadal maaraynta ololahacmpmaaraynta hal abuurka
Bilaabida Bogagga Ganacsiga Facebook iyo Suuqgeynta Facebook
Tirakoobka Raadinta Noolaha ee 2018: Taariikhda SEO, Warshadaha, iyo Isbeddellada